5 rieslọ ọrụ nke Intanet gbanwere n'ụzọ zuru oke | Martech Zone
5 lọ ọrụ nke Intanet gbanwere n'ụzọ zuru ezu
Tọzdee, Ọktoba 22, 2015 Douglas Karr
Innovation na-ab atu onu. Uber na-emetụta ụlọ ọrụ tagzi n'ụzọ na-adịghị mma. Igwe redio intanet na-emetụta redio na egwu na mgbasa ozi na mgbasa ozi ọdịnala. Vidio a na-achọ na-emetụta ihe nkiri ọdịnala. Mana ihe anyị na-ahụ abụghị nyefe nke ina, ọ bụ ọchịchọ ọhụrụ.
Ana m agwa ndị mmadụ mgbe niile na ihe na-eme abụghị otu ụlọ ọrụ na-egbu mmadụ ọzọ, ọ bụ naanị na ụlọ ọrụ ọdịnala nọ na nchekwa na uru ha bara ma jiri nwayọ na-egbu onwe ha. Ọ bụ oku ọ bụla ụlọ ọrụ ọdịnala na ha ga-etinye na teknụzụ ọhụụ ma ọ bụrụ na ha nwere olile anya na ha agaghị achịkwa.
N'ime iri afọ abụọ gara aga, mgbanwe Internetntanetị ebibila ụzọ ọdịnala esi arụ ọrụ mana o mekwaala ụlọ ọrụ niile na ọtụtụ ohere maka ihe ọhụụ.
CompanyDebt kere ihe omuma a, Mee ma ọ bụ nwụọ: 5 Industries gbanwere kpamkpam site na Internetntanetị, nke na-enye nnyocha banyere ụlọ ọrụ egwu, ụlọ ọrụ na-ere ahịa, ụlọ ọrụ na-ebipụta akwụkwọ, ụlọ ọrụ njem na njem njem.
Tags: ụlọ ọrụmgbanwe ịntanetịMusicPublishingretailiganjem
Atụmatụ 4 iji mebie ihe egwu nke oke aghụghọ